ကျွန်တော့်အိမ်: December 2008
တစ်ခါက အချစ်ဆုံးသို့ ……..
သို့...မေမေ....
အမေရိကားမှာ ဆေးကျောင်းတက်ရန် ပြင်ဆင်ခြင်း - အပိုင်...
နှစ်သက်မိသော ကဗျာ လေး
DWTS Live Show Dances
မဲရီးခရစ်စမတ် အန် ဟက်ပီးနယူးရီးယား တူယူအော
MUST VISIT လည်ပတ်ရမည့် နေရာများ - (၁) Mount Rushmo...
Black Hole ဖန်တီးနိုင်သည်ဟု ယူဆကြသော Large Hadron ...
မ၀ံ့မလပ် ကျိတ်ကျိတ်ဝှက် ထိတ်ငေးခဲ့သမျှ
မှောင်လာမှသာ မျက်ရည် စွန့်ဝံ့သူကျွနိုပ်
နှလုံးသွေးအကူတို့ ဖြင့် ဆေးခြယ်
အလွမ်းမောဆုံး ပန်းချီကားအဖြစ်သို့ 
ကျွနိုပ်ဘ၀ မှန်ကူကွက်ဝယ် တန်ဆာဆင်ချိတ်ဆွဲ ၀င့်ရဲခဲ့လေပြီ.....
ကျွနိုပ်စိတ်ဝယ် သင်၏ အပြုံးဖျော့တော့မှေးမှိန်ခဲ့သော်လည်း
အဟုန်ပြင်းပြင်း မပျက်မေတ္တာပို့ သသံသည်
ချစ်တဲ့သင် အေးချမ်းစေဖို့ သာ ရွယ်ရည်စူးခဲ့လေသည်........
ရေးသားသူ အိတာ at 10:37 AM 1 တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
တူညီရာစာစဉ် Love, Poem, ကဗျာ, အချစ်
ရှင့်ကို ကျမချစ်ခဲ့တာ မှားပြီလို့ သိလိုက်ရတဲ့ အချိန်တုန်းက တော်တော် နောက်မကျသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျမဇွတ်တိုးခဲ့တယ်။ ၀တ္တုတွေထဲမှာလို အရာအားလုံးကို ချစ်ခြင်းအားဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ ကျမယုံကြည်ခဲ့တယ်။ ရှင်လဲ အဲဒီလိုပဲ ယုံကြည်ခဲ့မှာပါလေ။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ဘ၀ဆိုတာ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ဘူးလေး။ အဓိကအားဖြင့်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ ယုံကြည်မှုလက်ကိုင်တရားတွေ၊ သူငယ်ချင်း၊ မောင်နှမနဲ့ မိဘဖိအားတွေဟာ မျှင်မျှင်လေးပဲ ရှိတဲ့ ရှင်နဲ့ ကျမရဲ့ ချစ်ခြင်းတရားတွေကို အေးအေးဆေးဆေးပဲ တိကနဲ ဖြတ်သွားခဲ့ပြီလေ။ နောက်ဆုံးရလာဒ်ကတော့ ကျမရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀ထဲမှာ ရှင်ဆိုတဲ့ နေရာတစ်ခု ကွက်လပ်အဖြစ်နဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့တာပေါ့။ တန်ခိုးဆိုတာရှိရင် ရှင်ဘယ်လိုတွေးခဲ့မယ်ဆိုတာကို ကျမလေ ရှင့်ရင်ဘတ်ထဲ ၀င်ကြည့်ချင်မိပါရဲ့။
ကောလိပ်စဖွင့်တဲ့ ကြာသာပတေးနေ့မှာပဲ့ ကျမ စာကြည့်တိုက်ထဲဝင်လာတုန်း lab report ထိုင်ရေးနေတဲ့ ရှင်က တစ်ချက်ပြုံးပြခဲ့တယ်။ ကျမအဲဒီအပြုံးကို ဘယ်တော့မှ မေ့မှာ မဟုတ်ဘူး။ အားလုံးရဲ့ အစဟာ ဒီအပြုံးတစ်ချက်ကြောင့်လို့ ပြောရင် ရှင်လဲ ငြင်းဆန်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ တခြားသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ ကျမတို့ နှစ်ယောက် စာတူတူထိုင်ဖတ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီသူငယ်ချင်းခြောက်ယောက်ဟာ ကျမရဲ့ ကောလိပ်သမိုင်းမှာ ဖျောက်ဖျက်ပစ်လို့ မရတဲ့ အမှတ်တရတွေပါ။
ကျမတို့ ခြောက်ယောက် ရိုးရှင်းစွာ အတွဲညီခဲ့ ကျတယ်။ အဲဒီတုန်းတဲက ရှင်ကျမကို စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်ဆိုတာ အခုမှ ကျောင်းကို ရောက်လာတဲ့ SATက လွဲလို့ အမေရိကန် cultureကို ဘာမှ မသိတဲ့ ကျောင်းသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျမ ဘယ်လိုလုပ်သိခဲ့ရမှာလဲ ရှင်ရယ်။ ကျမ ရိုးသားစွာပဲ အရမ်းခင်ဖို့ကောင်းပြီး ကူညီတတ်တဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက်လို့ သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ ကျမတို့ ခြောက်ယောက် ပျော်ရွှင်စရာအချိန်တွေကို ဖြတ်သန်းခဲ့တယ်။
ဒီကြားထဲမှာတော့ ကျမသိလိုက်ရတာက ကျမက လွဲလို့ ကျန်တဲ့ ငါးယောက်လုံး ခရစ်ယာန်တွေဆိုတာပါပဲ။ အပေါ်ယံမှာ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတဲ့ ဗုဒ္ဒဘာသာတစ်ယောက်လို့ မထင်ရက်စရာဖြစ်တဲ့ ကျမကို သူတို့ ဘာသာရေးယုံကြည်လာဖို့ သွတ်သွင်းခဲ့တာလေ။ ဒါပေမဲ့ ကျမနဲ့ စကားတွေ အမြဲပြောနေတဲ့ ရှင်က ကျမအကြောင်းတွေ ယုံကြည်မှုတွေကို သိနေခဲ့တယ်။ ရှင်ကိုယ်တိုင်တောင် တောင်အာဖရိကမှာ နှစ်နှစ်တိတိ သာသနာပြုထားတဲ့ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ ကျမကို ကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။ “ကိုယ်ယုံကြည်ရာကိုသာ ယုံကြည်ပါ။ ဘာသာရေးကြောင့် ငါတို့ ကွဲသွားစရာ အကြောင်းမရှိဘူး” လို့ ပြောခဲ့တာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ ကျမအခု မေ့ချင်နေပြီ။
ရှင်ဟာ ကျမရဲ့ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း၊ အားကိုးအရဆုံးအစ်ကိုတစ်ယောက်။
ကျောင်းတက်စ ပထမနှစ်ရဲ့ အမှောင်မိုက်ဆုံးအချိန်တွေမှာ ရှင်ရှိနေခဲ့တယ်။ ကျမဆိုးသမျှ ရှင်ခံခဲ့တယ်။ ကိုယ့်အတန်းကို ဖျက်ပြီး ကျမရဲ့ အိမ်စာတွေကို ကူလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ စာမေးပွဲခန်းထဲမှာ ကျမရဲ့ ရိုးရိုး calculatorနဲ့ ရှင့်ရဲ့ graphing calculatorကို ရှင်လဲပေးခဲ့တယ်။ ကျမတို့ရဲ့ များပြားလှတဲ့ text တွေကို ရှင်မေ့နိုင်ပ့ါမလား။ နာမည်ကြီး rock band တစ်ခု ကျမတို့ မြို့မှာ လာဆိုမယ်ဆိုတော့ ရှင်ပိုက်ဆံနှစ်ရာကျော် အကုန်ခံပြီး ကျမ သွားချင်လွန်းတာကို လိုက်ပို့ပေးခဲ့တယ်။ ကော်ဖီဆို အနံ့တောင် မကြိုက်တဲ့ရှင် Starbucks မှာ ကျမနဲ့ စာတူတူ လိုက်ဖတ်ခဲ့တယ်။
နောက် semester မှာ ကျမ ကြက်တောင်ရိုက်လို့ အတန်းချိန်ပြောင်းတော့ သုံးနာရီများတောင် အလယ်မှာ လပ်နေတာကို မညီးမညူ ကျမနဲ့တူတူ အတန်းလိုက်တက်ခဲ့တယ်။ ပထမနှစ်တစ်နှစ်လုံး ရှင်ကျမအတွက် ရှိနေပေးခဲ့ပြီး ကျမကို ဘာမှ ဖွင့်မပြောပဲ နေနိုင်တာကို အံ့သြမိပါရဲ့။ နောက်မှ ရှင့်အခန်းဖော်ဆီက ဘာသာရေးအယူအဆတွေကြောင့် ရှင်ဖွင့်မပြောခဲ့တာပါလို့ သိလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကျမရှင့်ကို ချစ်မိနေပါပြီ။
ကျောင်းကြီးပိတ်လို့ နွေရောက်တော့ ရှင်တခြားနယ်မှာ အလုပ်သွားလုပ်တော့လဲ ကျမတို့ နှစ်ယောက် အခင်အမင်မပျက် text တွေ ရိုက်ခဲ့ကြတယ်လေ။ ကျမ ရှင့်အလုပ်အကြောင်းတွေကို နားထောင်ရတာမက်မောသလို ကျမရဲ့ သုတေသနlabထဲက အကြောင်းတွေကလဲ ရှင့်အတွက် မပျင်းစေရဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျမ တစ်ယောက်သောသူကို ရှာတွေ့ခဲ့တယ်။ ကျမနဲ့ မေဂျာတူ အတန်းတူ senior တစ်ယောက်ကို ခရီးတစ်ခုအတူတူသွားရင်းနဲ့က တွေ့ခဲ့တယ်။ သူလဲ ရည်းစားမရှိ၊ ကျမလဲ single။ ဒီတော့လဲ...။
ဒုတိယနှစ်ကျောင်းပြန်ဖွင့်တော့ ကျမတို့ နှစ်ယောက် အင်္ဂါနေ့တိုင်း ထမင်းတူတူစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုသော အင်္ဂါနေ့မှာတော့ သူ့ကို ရှင်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဖို့ ခေါ်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီနေ့ကိုတော့ ကျမ မေ့လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရှိရည်းစားကို အရမ်းခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ပေးတွေ့တာ သမားရိုးကျ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလေ။ ခင်တတ်တဲ့ ရှင်ဟာ စကားဟ,ဟတောင် မပြောခဲ့ဘူးလေ။
အောက်တိုဘာတစ်ရက်နေ့, ရှင်မွေးနေ့မှာ ကျမတစ်ယောက်ထဲကိုပဲ ဖိတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျမ မသိရရိုးအမှန်ပါ။ ရှင်ကျမကို ဖွင့်ပြောခဲ့တယ်။ ပထမတော့ ကျမနောက်နေတယ် ထင်လို့ ပျက်ရယ်ပြုခဲ့တယ်လေ။ “ငါ မင်းရဲ့ ချစ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖုိ့ အရည်အချင်းမရှိဘူးလား”လို့ မေးလိုက်တဲ့ အခိုက်အတန့်မှတော့ ကျမရဲ့ နှလုံးသွေးတွေ ရပ်တန့်သွားပြီ။ ကျမ ဦးနှောက်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မပါပဲ အခိုက်အတန့်လေးမှာတင် ခေါင်းညိတ်မိခဲ့တယ်။ အံ့သြတုန်လှုပ်နေတဲ့ ကျမရယ်၊ ဟင်းပန်းကန်တွေရယ်၊ ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းထားတဲ့ cupcake သေးသေးလေးရယ်ရှေ့မှာ ရှင်ကတော့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ ကျမကို ရည်းစားနဲ့ အဆုံးသတ်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။
ကျမဟာ လူသေတစ်ယောက်လိုပဲ သွေးအေးအေးနဲ့ပဲ ရည်းစားကို ဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဆေးမိထားတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်လိုပဲ ရှင့်ကို လက်ခံမိခဲ့ပါတယ်။ ကျမ ရှင်နဲ့ ရှိနေတဲ့ အချိန်တွေတိုင်းကို တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ရှင့်ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာပဲ တစ်ချိန်လုံးနေချင်မိခဲ့တယ်။ နှစ်ယောက်လုံးကျောင်းစာတွေ အလုပ်တွေနဲ့ ပိနေတာတောင် အချိန်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လေ။ ကျမလေ သောကြာနဲ့ စနေနေ့တွေကိုပဲ တစ်ပတ်လုံးတမ်းတနေမိတယ်။ တနင်္ဂနွေတိုင်းကျရင်တော့ ကျမတစ်ယောက်ထဲပဲ ကျိတ်ပြီး နောက်တစ်ပါတ်သောကြာကို မက်မောမိခဲ့တယ်။ ရှင်ကတော့ ရှင့်ဘုရားကျောင်းမှာ တနေကုန်ကျမကို မေ့နေမှာပါ။
ကျမ Thanksgiving တိုင်းကို မုန်းမိနေမှာ အမှန်ပါ။ အဲဒီနေ့ဟာ ကျမအိမ်မက်က နိုးလာတဲ့နေ့ပေါ့။ Thanksgiving မတိုင်ခင် ရှင့်အိမ်က မိသားစုနဲ့ တွေ့ဖုိ့ ကျမကို ဖိတ်ခဲ့တယ်။ အံ့သြခြင်းတွေနဲ့ အတူ ကျမကြောက်လန့်ခဲ့တယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ဒါဘာအဆင့်လဲလို့ မေးခဲ့တယ်။ “နောင်အတွက် လက်တွဲဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို မိဘနဲ့ ပေးတွေ့ချင်တာ။” ကျမတို့ နှစ်ယောက်စကားတွေ အများကြီးပြောခဲ့တယ်လေ။ ဘုရားကျောင်းမှာ လက်ထပ်မှ အိမ်ထောင်ကျတယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့ ရှင်နဲ့ ခရစ်ယာန်ဆို ဘာသာပြောင်းဖို့ အိမ်မက်တောင် မမက်တဲ့ ကျမတို့ နှစ်ယောက်ကြားမှာ တင်းမာခဲ့ကြတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်က မင်းယုံကြည်ရာကို ယုံကြည်ပါဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ကျမရှင့်ကို
လွတ်လွတ်လပ်လပ်ချစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနေ့ကတော့ ရှင့်အိမ်ကိုလိုက်လည်ဖို့ ကျမ "အဆင်သင့် မဖြစ်သေးဘူး"ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းနဲ့ ကျမတို့ အဆုံးသတ်ခဲ့ကြတယ်။ ရှင်ဟာ သွေးအေးတဲ့ လူသားတစ်ယောက်လား။ ရှင်ကျမကို တိကနဲပဲ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ နေနိုင်ရက်သူရယ်။ ကျမကတော့လေ နေ့စဉ်ဘ၀မှာ ရှင်တစ်ယောက်မရှိတော့ ဟာကွက်ကျန်ခဲ့တယ်။ ရှင်ကျမကို ဖုန်းမခေါ်ဘဲ မတွေ့ဘဲ နေနိုင်ရက်တယ်နော်။ ဘာသာတရားဆိုတာ ဘ၀မှာ ကြီးစိုးတာ အမှန်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်တောင်ပဲလား…….
အိပ်မရတဲ့ ညတွေ၊ ကျခဲ့ရတဲ့ မျက်ရည်တွေ၊ စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့ စာမေးပွဲအမှတ်တွေကြားမှာ ကျမ အခန်းဖော်တွေ ကျမ သတ်သေသွားမှာစိုးလို့ တစ်နာရီတစ်ခါ လာစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြတယ်။ မျက်နှာကျက်ကို ပက်လက်လန်ပြီး အတိုင်းသား ကြည့်နေတဲ့ ကျမကို ရူးသွားပြီလို့ ထင်မှတ်ခဲ့ကျတယ်။
ကျမနေနိုင်သွားပါပြီ။ ရှင်ဆိုတာ ကျမရဲ့ ပုံရိပ်တစ်ခုပါ။ ရှင့်နာမည်ကို ကြားလိုက်တိုင်း ကျမနှလုံးသားထဲ တဆစ်ဆစ်နာကျင်နေဆဲပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျမ ရှင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်သွားဖို့ ကျမဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ ရှင်နဲ့ ဘာသာတူမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ပွဲမှာ ရှင်ဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ ၀တ်စုံလှလှလေးဝတ်ပြီး ပွဲတက်နိုင်ဖို့ ကျမလေ, ကျမ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုတာ ရှင်သိစေချင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ PP at 9:24 PM 16 တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
"ငါ့သမီး ကြီးလာရင် လူတွေရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်ပေးပြီး ကုသိုလ် ရှိတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်တဲ့ ဆရာဝန်ကြီး တစ်ယောက် ဖြစ်ရမယ်" ဆိုတဲ့ စိတ်ဆန္ဒက သီတာထွန်း ရဲ့ အမေဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ဥမ္မာ့ ဘ၀မှာ အကြီးမားဆုံး ဆန္ဒတစ်ခုပါ။ "ငါ့သမီး စာကြိုးစားနော်၊ ၁၀တန်းမှာ အမှတ်များအောင်လုပ်၊ ၁၀တန်းပြီးရင် ဆေးကျောင်းတက်ပြီး ဆရာဝန်ကြီး ဖြစ်အောင် လုပ်ရမယ်" ဆိုတဲ့ စကားကတော့ သီတာထွန်း မရိုးနိုင်အောင် မကြားချင်လောက် အောင်ကို ဒေါ်ဥမ္မာက အမြဲတန်း ပြောနေတတ်တယ်။ တစ်ဖက်မှာတော့ သီတာက ဆရာဝန်မပြောနဲ့၊ ဆေးပညာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် စိတ်ဝင်စားမှု တစ်ပြားတစ်စိ မှ မရှိတဲ့ အပြင် ၀ါသနာလည်း လုံးဝ မပါပါ။ သီတာ ဖြစ်ချင်တာက နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဝေဟင်ယံမှာ ပျံဝဲနေတဲ့ လေယာဉ်တွေပေါ်မှာ အမြဲတန်း အပြုံးအပြည့်နဲ့ လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့ လေယာဉ်မယ်တစ်ဦး။ ငယ်ငယ်ကထဲက လေယာဉ်ပျံကြီး ကောင်းကင်မှာတွေ့ရင် "မေမေ၊ မေမေ၊ ဟိုမှာ လေယာဉ်ကြီး လေယာဉ်ကြီး" ဆိုပြီး မျက်နှာပေါ်မှာ အပြုံး အပြည့် ပန်ဆင်ထားတတ်တဲ့သူပေါ့။ သီတာထွန်း တစ်ယောက် ဆရာဝန် တစ်ဦး လုံးဝ မဖြစ်ချင်မှန်း ဒေါ်ဥမ္မာ ကောင်းကောင်းကြီး သိထားတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ တစ်ချိန်လုံး သီတာထွန်း အီဆိမ့်နေအောင် ဆရာဝန်ကောင်းကြောင်း၊ သမီးဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ သူ့အတွက် အရမ်း အရေးကြီး ကြောင်းတွေ ပြောပြီး ဖိအား ပေးနေတတ်တယ်။
လူတွေ ဆိုတာ တကယ်တော့ သီးခြား တည်ရှိနေတဲ့ ခန္ဓာ၊ သီးခြား တည်ရှိနေတဲ့ စိတ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ ဒီလောက ကြီးမှာ ယုတ္တိရှိရှိ သေချာ တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘယ် လူနှစ်ယောက်မှ ဘယ်လောက်ပဲ ခင်နေပါစေ၊ ချစ်နေကြပါစေ။ ထပ်တူထပ်မျှ ကျဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ လူတိုင်းမှာ မိမိတို့ ကိုယ်စီ ဖြစ်ချင်တာတွေ ကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်။ အပေါ်မှာ ပေးခဲ့တဲ့ ဥပမာ လိုမျိုးပဲ သီတာထွန်း ဖြစ်ချင်နေတာက လေယာဉ်မယ်၊ သီတာထွန်းက သီတာထွန်းရဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက်မှာ မိမိ ၀ါသနာပါပြီး စိတ်ချမ်းသာတဲ့ အလုပ်ဖြစ်မယ် ထင်တဲ့ လေယာဉ်မယ် တစ်ဦးဖြစ်ချင်တယ်။ ဒီနေရာမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာက ဒေါ် ဥမ္မာ၊ ဒေါ်ဥမ္မာက သူ့သမီးကို ဆရာဝန်ကြီး ဖြစ်စေချင်တယ်။ ဒီဆန္ဒက ဒေါ်ဥမ္မာရဲ့ ဆန္ဒ၊ သီတာထွန်းရဲ့ ဆန္ဒမဟုတ်ပါ။ ဒေါ်ဥမ္မာက မိမိဘ၀နယ်ပယ်ကို ကျော်လွန်ပြီး တစ်ခြား တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ထဲကို သူဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်စေချင်တာကို ကျူးကျော်ပြီး သက်ရောက်နေတယ်။
အဆိုပါ ပြသာနာမျိုးက မြန်မာနိုင်ငံတင်မကပဲ ကမ္ဘာအနှံ့အပြား အဓိက အာရှ မှာ မိဘတွေက ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာ တစ်ခုပါ။ ဒီမိဘတွေ အားလုံးရဲ့ စိတ်ထဲမှာ တူညီစွာ ခံစားနေတာ တစ်ခုက "အချစ်" ပါ။ သူတို့ သူတို့ သားသမီးတွေကို ချစ်တယ်။ သားသမီးတွေကို အောင်မြင်စေချင်တယ်။ သားသမီးတွေကို သူတို့ရဲ့ ဘ၀မှာ အစစအရာရာ အောင်မြင်စေချင်တယ်။ ဒါတွေဟာ မိဘတွေရဲ့ မေတ္တာလို့ လူအများစုက တွေးခေါ်ချင်ရင် တွေးခေါ်ကြလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ "လွဲမှားသော အချစ်" (သို့) "လွဲမှားသော မေတ္တာ" လို့ပဲ သမုတ်ပါရစေ။
ချစ်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း လူတစ်ဦးဟာ နောက်လူတစ်ဦးကို အမှန်အကန် ချစ်ပြီဆိုရင် မိမိကိုယ်ကို အဆိုပါ လူနဲ့ ခွဲခြား နိုင်စွမ်း ရှိရမယ်။ အချစ်စစ်တစ်ခုမှာ ခွဲခြားနိုင်စွမ်း မရှိပဲနဲ့ အဲ့ဒီအချစ်ကို အချစ်လို့ မသတ်မှတ်နိုင်ဘူး။ လူတွေရဲ့ စိတ်ဆိုတာ အင်မတန်မှာ ထူးခြား ရှုပ်ထွေ တဲ့ ဖွဲ့စည်းမှု တစ်ခုပါ။ စိတ်ဆိုတဲ့ အရာတစ်ခုဟာ နောက်ထပ် တခြား စိတ်ဆိုတဲ့ အရာတစ်ခုနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ ကျဖို့ ဆိုတာ အင်မတန်မှ ရှားလွန်းလှပါတယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် ပိုပြီး လက်တွေ့ ကျပါတယ်။ တစ်နေရာထဲ၊ တစ်ချိန်ထဲ၊ တစ်မိထဲက မွေးဖွားလာတဲ့ အမွှာတွေတောင် စိတ်ချင်း ထပ်တူထပ်မျှ ကျဖို့ ဆိုတာ ခက်ခဲလွန်းပါတယ်။ အစက ပြောသွားတဲ့ သီတာထွန်းတို့ရဲ့ ပြဿနာကို ပြောရရင် ဒေါ်ဥမ္မာရဲ့ သီတာ့အပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာဟာ နည်းနည်း လွဲမှားသွားပါတယ်။ သမီးကို မိမိ ဖြစ်စေချင်တာထဲကို အတင်း ဆွဲသွင်းမယ့် အစား ငါ့သမီးဘ၀မှာ ငါ့သမီး စိတ်ချမ်းသာတဲ့ အလုပ်တစ်ခုနဲ့ သူ့ဘာသာ ရှင်သန် နေထိုင်ရမှာပဲလေ ဆိုတဲ့ အတွေးကို လက်မခံနိုင်တဲ့ အချက်က မြန်မာပြည်က မိဘတော်တော် များများမှာ တွေ့ရပါတယ်။ "ဟိုဟာ မလုပ်နဲ့။ ဒီဟာ မလုပ်။ ဒီဟာလုပ်၊ ဟိုဟာလုပ်" ဆိုပြီး အမြဲတမ်း ဖိအားပေး နေမယ် ဆိုရင် အချစ်တစ်ခုဟာ မှားယွင်းသွား နိုင်ပါတယ်။ မကောင်းမှု တစ်ခု တစ်စုံတစ်ရာ အမှားမလုပ်နေရင် တော်ပါပြီ။ အစစအရာရာ မိမိတို့ စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်စေရလောက်အောင် သူတို့က ကိုယ် မှ မဟုတ်ပဲလေ။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ အားလုံး ဖြစ်စေချင်ရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လုပ်မှပဲ ရတော့မှာပေါ့။ အမှန် ပြောရမယ် ဆိုရင် ခုနတုန်းက ပြောခဲ့တဲ့ ဒေါ်ဥမ္မာနဲ့ သီတာထွန်း ဇာတ်လမ်းက ကျွန်တော် လက်တွေ့ ဘ၀မှာ သေချာ မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်တစ်ခုပါ။ သီတာက မိဘစကားကို မလွန်ဆန်နိုင်ပဲ ဆေးပညာကို ဖတ်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး သီတာထွန်းခမျာ လေယာဉ် အရုပ်လေး တစ်ရုပ်ကိုင်ထား၇င်း မိမိနာမည်တောင် မမှတ်မိလောက်အောင် ရူးသွားရှာပါတယ်။ ဒေါ်ဥမ္မာလည်း ထိုအချိန်မှာ ရင်ကျိုးနာကျသွားတာ ဘ၀တစ်သက်စာ သေရာပါ ဖြစ်သွားပါတယ်။
တကယ်တော့ အချစ်တစ်ခုမှာ နားလည်မှု ဆိုတာ အ၇မ်း အရေးကြီးပါတယ်။ လူနှစ်ဦးဟာ တစ်ဦးကို တစ်ဦး အပြန်အလှန် နားလည် ပေးနိုင်ရမယ်။ နားလည်မှု မရှိပဲနဲ့တော့ အချစ်တစ်ခု သာယာ လှပဖို့ဆိုတာ ခက်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်ပြီဆိုရင် ထိုလူနဲ့ မိမိကိုယ်ကို (ထိုလူရဲ့ စိတ်နဲ့ မိမိရဲ့စိတ်) အစစအရာရာ မရမက ပေါင်းစည်းပစ်ဖို့ ထက် နားလည်မှုကို ဦးစားပေး ရှေ့တန်းတင် နိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကံကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော့်မိဘက ဘယ်တော့မှ ကျွန်တော့်ကို ဖိအား မပေးဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖိအားပေးတတ်တဲ့ မိဘတွေ အများကြီး ကျွန်တော် မြင်ဖူးပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အံမခန်း မိဘမေတ္တာကိုလည်း မြင်တယ်။ ဒါပေမယ့် မှားနေတဲ့ နေရာလေးတွေ ရှိတယ်။ နောင် ရေရှည် ဖြစ်လာမယ့် အကျိူးဆက်တွေကို သတိမထားမိပဲ မိမိသိပ်ချစ်ရတဲ့ သားသမီးတွေကို ဒုက္ခ ပေးနေ သလို ဖြစ်သွားတော့ တစ်ချိန်မှာ တစ်ခုခု ရင်နာစရာတွေ ဖြစ်လာရင် သားသမီးလည်း မကောင်းသလို မိဘတွေ လည်း ဘ၀တစ်သက်စာ စိတ်ဆင်းရဲ ရတာမျိုးဖြစ်လာရင် ဘယ်သူမှ မကောင်းပါဘူး။
နောက်ဆုံး အနေနဲ့ Kahlil Gibran ရဲ့ မိဘတွေ အတွက် ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ရာမှာ သတိထားစေဖို့ စာသားလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်တယ်။ တစ်ချို့စာသားတွေက မြန်မာလို တိုက်ရိုက် အဓိပ္ပာယ် ပြန်လိုက်ရင် လွဲမှားကုန်မှာဆိုးလို့ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ဖတ်တာက ပိုသင့်တော်ပါတယ်။
You may house their bodies but not their sous,
ကမ္ဘာပေါ်က မိဘတိုင်းကို လေးလေးနက်နက် ချစ်ခင် လေးစားလျှက် (ဒေါ်ဥမ္မာ့လို အဖြစ်မျိုး မကြုံပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းရင်း)
ရေးသားသူ Tea at 8:17 PM6တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
လူ့ ဘ၀ရဲ့ရယ်သံမောသံ ငိုသံရှိုက်သံကြားမှာ
ချန်ထားခွင့် ၊ စိုက်ပျိူးခွင့် ၊ ခွဲဝေမျှနိုင်ခွင့်တွေ
အခန်းထောင့်ထဲ သိမ်ကာကြုံ့ ဝင်
မာယာရောင်စုံခြယ် ၀ါဂွမ်းစိုင် နုနုတွေအလယ်
အစားမထိုးနိုင်တဲ့ အရိပ်ကို ခိုဝင်ချိန်
အခိုက်အတန့်နောက်ကျရခြင်းရဲ့
ရေးသားသူ အိတာ at 11:21 AM7တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
အမေရိကားမှာ ဆေးကျောင်းတက်ရန် ပြင်ဆင်ခြင်း - အပိုင်း (၁)
တီးကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ပညာသင်ယူချင်သူများအတွက်ဆိုပြီး ပို့စ်တစ်ခုရေးဖူးပါတယ်။ Ask Me Corner မှာ တစ်ယောက်က မေးဖူးတာကြောင့် ဒီပို့စ်လေးကို ရေးဖြစ်တာပါ။ အခုတလောမှာ United States of America မှာ Medical School ဆေးကျောင်းတက်ဖို့ကို ကျောင်းသားတော်တော်များများ စိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲတော့ မသိနော်။ တို့ဗမာနိုင်ငံမှာ ဆေးကျောင်းကြီး သုံးခုတောင်ရှိတာကို။ အဟွတ် အဟွတ်။
တို့ဗမာနိုင်ငံမှာတော့ များသောအားဖြင့် ဟုတ်သော်ရှိ၊ မဟုတ်သော်ရှိ။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ အများစု ဆယ်တန်းပြီးလို့ အမှတ်မီတာနဲ့ အိမ်က ဆေးကျောင်တန်းပို့ လိုက်ကော။ အဲ.. ဆေးကျောင်းလဲ စကော ၀ါသနာ မပါတဲ့သူနဲ့၊ မလိုက်နိုင်တဲ့ သူနဲ့၊ စာမေးပွဲနီးလုိ့ spot လိုက်တဲ့ ပညာရေးစနစ်ကို မကြိုက်လို့ ထွက်လိုက်တဲ့သူနဲ့ 06တုန်းက ကျောင်းသား ၁၀၀ ကျော် ဆေးကျောင်းကနေ ဆေးခွင့်(၂)နှစ်နဲ့ နားလိုက်တယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ ပြီးတော့ စင်ကာပူ၊ အမေရိကား၊ သြစတျေးလျနဲ့ ဗြိတိန်ကို ကျောင်းတက်ဖို့ ထွက်ကုန်ကြကော။ ဗမာပြည်အတွက် နှမြောစရာဖြစ်သလို၊ တကယ် ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်ပြီး ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို အကျိုးပြုချင်သူတွေ အတွက်တော့ ရင်နာစရာပါ။ ကဲ… myhome16 ၀ိုင်းတော်သားများရေ၊ ဟုတ်တယ်ဟုတ်????
ဒီအပါတ်မှာတော့ အများက စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ အမေရိကားမှာ ဆေးကျောင်းဘယ်လိုတက်မလဲဆိုတာကို ရေးသွားမှာပါ။ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ အတွက်တော့ Ask Me Corner မှာ ဆက်မေးသွားပါ။ ဒီတစ်ပါတ် ပေဖူးပြောမှာက ဗမာပြည်က MBBS ဘွဲ့ မရှိပဲ ထွက်လာတဲ့သူတွေ အတွက်ပါ။ M.B.B.S ရှိတဲ့သူတွေကတော့ စာမေးပွဲ ဖြေပြီး residency တန်းဆင်းလို့ ရတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ အဲဒါကိုတော့ ဒေါက်တာရမ်းကုကို မေးပါ။ သူပိုသိပါလိမ့်မယ်။
America မှာတော့ ဆရာဝန်ဘွဲ့ကို MD လို့ လူသိများကြပါတယ်။ Doctor of Medicine ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဆေးကျောင်းကို အထက်တန်းကျောင်းပြိးတာနဲ့ တန်းသွားလို့ မရပါဘူး။ အဲ…. သွားလို့တော့ ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ accelerated program တွေက အပြိုင်အဆိုင်များပြီး ၀င်ရအရမ်းကျပ်ပါတယ်။ စာတွေနဲ့ အရမ်းပိပြီး life မရှိလို့ များသောအားဖြင့် ကျောင်းသားတွေ သိပ်စိတ်မ၀င်စားကြပါဘူး။ ဆေးပညာဘွဲ့မှာ ဒီမှာတော့ မာစတာဒီဂရီဘွဲ့ပါ။ Undergraduate ကောလိပ်ကို ၄ နှစ်တက်ပြီး ဘွဲ့ရတော့မှာ ဆေးကျောင်းကို လျှောက်ရတာပါ။ ဒါလဲ အလွယ်လေးတော့ မဟုတ်ဘူးနော်။ ပေဖူးတို့ ကျောင်းက medical school ဆို နှစ်စဉ်လျှောက်တဲ့သူ ကျောင်းသား ၁၂၀၀ ကျော်ပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ အထပ်ထပ်စစ်ချပြီး ၁၀၃ ယောက်တိတိကိုပဲ လက်ခံတာပါ။ Undergraduate လေးနှစ်မှာတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Major ယူလို့ရပါတယ်။ Medical School က သတ်မှတ်ထားတဲ့ အတန်းတွေတော့ မှီအောင်တက်ပေါ့နော်။ များသောအားဖြင့် Biol ဆိုရင် General Biol, Cell Biology, Genetics, Physiology ပေါ့။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ဒီဂရီပြီးအောင်လဲ တက်ပေါ့။ biol မေဂျာယူထားမှ ဆေးကျောင်းသွားရမယ် မရှိပါဘူး။ ပေဖူးသူငယ်ချင်းတွေထဲမှာဆို Photography, Psychology, Arts မေဂျာတွေလဲ ရှိပါတယ်။ ကျောင်းပြီးတော့မှ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ MCAT ဖြေ၊ ပြီးတော့ ကိုယ်Undergrad လေးနှစ်မှာ လုပ်ထားတဲ့ performance တွေ (အဓိကအားဖြင့်တော့ Volunteer Service, Leadership Positions, Research Jobs အစရှိတာတွေ) ကို ကြည့်ပြီး အင်တာဗျူးခေါ်ပြီးမှ ၀င်ခွင့်ရတာပါ။ ဗမာပြည်က ဆေးကျောင်းတွေလို စာဖက်ပိုင်းတစ်ခုတည်း တော်ရုံနဲ့ လုံးဝလက်မခံပါဘူး။
ဘာလို့ ဒီလောက်နည်းနည်းလေးနဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲပဲ လက်ခံတာလဲ ဆိုတော့ quantity ထက် quality ကို အလေးထားလို့ ပါပဲ။ အလေးထားရမယ်လေ။ ကိုယ်က america မှာ ဆရာဝန်လုပ်ချင်တာကိုး။ ဒီဘ၀ကို ရွေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ နောက်မှာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ ပေါင်း မြောက်မြားစွာ တန်းစီနေတာကိုး။ ဗမာပြည် ဆေးတက္ကသိုလ်လို ဘွဲ့ရပြီးတာနဲ့ စာမေးပွဲဘ၀က ကျွှတ်ပြီဆိုတာမျိုး မဟုတ်ဘူးလေ။ အဲဒါကြောင့်လဲ လူတော်တော်များက ဆေးလိုင်းမလိုက်ချင်ကြဘူး။ life-time Stress ကိုး။
ကဲ ဒီလောက် အခက်အခဲတွေ များနေတဲ့ကြားက ဘာလို့ ဆေးကျောင်းသွားချင်လဲ။ အများစုက ၀ါသနာပါလို့ပါ။ ပိုက်ဆံသောက်သောက်လဲ ရတာလဲ ပါတာပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်ကို စိတ်အားထက်သန်ပြီး “I deserve to beadoctor” ဆိုတဲ့ သူတွေပဲ ဒီလမ်းကို လိုက်ကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အမေရိကားမှာ ဆရာဝန်မဟုတ်ပဲ လူမွှေးလူတောင် ပြောင်အောင် နေနိုင်လို့ ပါပဲ။
ဆိုးကျိုးတွေက ဘာတွေလဲဆိုတော့ နှစ်ရှည်တယ်။ ပိုက်ဆံ အကုန်အကျများပါတယ်။ ဆေးကျောင်းက ဘွဲ့ရပြီး ထွက်လာတဲ့ ပူပူနွေးနွေးကျောင်းသားဆိုရင် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းက ဘဏ်ပေါင်းစုံမှာ အကြွေးလည်ပင်းခိုက်အောင် ရှိပါတယ်။ နောက်ပိုက်ဆံရတော့လဲ ဖြည်းဖြည်းချင်းဆပ်ယူပေါ့နော်။ အဟိ…. များသောအားဖြင့် ကျောင်းပေါ်မူတည်ပြီး ဒေါ်လာနှစ်သိန်းကနေ ငါးသိန်းအထိ အကြွေးတင်ပါတယ်။
ကျောင်းမှာ တင်ပဲ ရှစ်နှစ်တိတိ။ ဒါပေမဲ့ ဘိုင်ပြတ်သွားလို့ အလုပ်ထွက်လုပ်ရင် ကိုယ်ဆွဲရင် ဆွဲသလောက်ကြာမယ်။ ပြီးရင်တော့ house ဆင်းရမယ်။ ဒီမှာတော့ residency ဆင်းတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါက ကိုယ့် speciality ပေါ်မူတည်ပြီး ကြာတာပါ။
ရိုးရိုးအထွေထွေကုဆရာဝန် Physician – သုံးနှစ်
ခွဲစိတ်ကု ဆရာဝန် - ခုနှစ်နှစ်
ဒါက basic ပဲ ရှိသေးတယ်။ နောက် master လိုင်းလိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် အလုပ်သင်ဘ၀မှာတင် တော်တော်ကြာပါတယ်။ နှလုံးဆို နောက်ထပ်သုံးနှစ်၊ Neuro လိုင်း (ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြော) ဆို သုံးနှစ်ပါ။ အလုပ်သင်ဘ၀မှာ ပိုက်ဆံလဲ သိပ်မရပါဘူး။ အဖိအနှိပ်လဲ ခံရပါသေးတယ်။
Age 18 - ကောလိပ်စပြီ ဆိုပါတော့။
Age 22 – bachelor ဘွဲ့ရပြီ။
Age 23 - ဆေးကျောင်း စတက်ပြီ။
Age 27 - ဆေးကျောင်းဘွဲ့ရပြီပဲ ဆိုကြပါစို့
Age 28 - အလုပ်သင်ဘ၀ အစ
Age 31 – Physician လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာတင် ပြီးပါပြီ။
Age 34 - ခွဲစိတ် residency ပြီးပြီ။
Age 37 - နှလုံးခွဲစိတ်ဆရာဝန် ဖြစ်ပါပြီ။
ကဲ… ဆရာသမားတို့ရေ အသက်၃၇တဲ့နော်။ ၃၇ ဆိုတာ တော်တော်အိုနေပြီလို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ ဒါတောင် အနည်းဆုံး တွက်ထားတာ။ ဖြစ်နိုင်ချေတွေကြောင့် ကျောင်းခဏနားလိုက်တာတွေ မပါသေးဘူး။ တပါတ်ကို နာရီ၈၀ အလုပ်လုပ်ပြီး ဆေးရုံမှာပဲ အိပ်၊ ဆေးရုံမှာပဲ စား၊ ဆေးရုံကလွဲလို့ တခြားဘ၀ဆိုတာ မရှိတော့ဘူးလို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ ကျောင်းထဲက အိမ်ထောင်ကျထားရင်တော့ ဒီအချိန်မှာ လင်မယားတွေ အများဆုံးကွဲတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ မတတ်နိုင်ဘူးလေ… ကိုယ်က ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တာကိုး။
ပေဖူးက အဆိုးတွေပဲ ပြောသွားတယ်လို့တော့ မထင်စေချင်ဘူးလေ။ ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာတော့ ကောင်းကွက်တွေက တော်တော်ရှားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာဝန်ဖြစ်သွားရင်တော့ အမေရိကားမှာလဲ ဆရာဝန်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်က ဗမာပြည်မှာလိုပဲ ဂုဏ်ရှိပါတယ်။ ပိုက်ဆံလဲ ရပါတယ်။ ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာတော့ ကိုယ်နေတဲ့ မြို့ပေါ်မူတည်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံပေါ်မှာလဲ မူတည်ပါတယ်။ လူဘယ်နှစ်ယောက် ကိုယ့်ဓားအောက်မှာ အသက်ပျောက်သွားလဲ အပေါ်မှာလဲ မူတည်ပါတယ်။ :D
ဒီတစ်ပါတ်တော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ တော်လိုက်ကြစို့။ နောက်တစ်ပါတ်မှာတော့ ဆေးကျောင်းလျှောက်ဖို့ ဘာတွေလိုတယ်။ ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားသင့်တယ် ဆိုတာတွေကို ဖော်ပြသွားပါမယ်။
ရေးသားသူ PP at 12:22 AM 15 တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
တူညီရာစာစဉ် American Education, Article, ASK ME, အမေရိကန် ပညာရေး, မေးချင်ရာမေး
ဘယ်သူ ရှိမလဲ စကားမပီကလာ ပီကလာနဲ့ပြောပြီး တီတီမေသူ ဆိုပြီးလာလာချွဲနေတဲ့ ငချွဲမလေး မက်မက် ပေါ့၊
တတ် တာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူး နောက်က မေ၇းရင်ဘာဖြစ်မယ် ညာဖြစ်မယ်နဲ့ ခြိမ်းလုံးခြောက်လုံးနဲ့ ။
ခေါင်းစဉ်က အနှစ်သက်ဆုံး ကဗျာ တစ်ပုဒ်တဲ့
ကျမ ကဗျာတွေကို ခံစားတတ်သလို နှစ်သက်တယ် ခံစားနေရချိန်မှာ ကဗျာ တစ်ချို့ ပေါက် ကရ ရေးတတ်တယ်၊
အကြိုက်ဆုံး ကဗျာတွေက ဘလောခ်ထဲမှာ ဆို ဂစ်တာရေးတဲ့ကဗျာတွေကို ကြိုက်တယ် (www.mrguiter.blogspot.com)
နောက်ပြီး ညီမလေး အိတာ ကဗျာတွေကိုလဲ နှစ်သက်တယ်၊ ကိုဖြိုးငယ်ကဗျာတွေကိုလဲ ကြိုက်တယ်
ကောင်းကင် ကို ရဲ့ ကဗျာတွေ အားလုံးလိုလို ကြိုက်တယ်၊
ကိုညိမ်းညို ၊ ကိုမျှားပြာ၊ ကိုဆိုးသွမ်း၊ ကဗျာတွေကလည်း အတော်လေး ကောင်းကြတယ် လူချင်းမသိပေမယ့် ကဗျာတွေကိုတော့ နှစ်သက်ပြီးလေးစားမိတယ်၊ နောက်ပြီး မပန်းခရေ ရဲ့ ကဗျာ တစ်ချို့လဲ နှစ်သက်မိသေးတယ်၊မလင်းလက်ကြယ်စင်ရဲ့ ကဗျာ တစ်ချို့လဲ နှစ်သက်မိပါသေးတယ်(၈၈ ပြီးမှလူဖြစ်လာတယ်လို့ သူ့ဘလောခ်မှာရေးထားတာတွေ့ပေမယ့် မကြာမတင်မှာမင်္ဂလာဆောင်တော့မှာလို့ ရေးထာတာတေါ့ တော့ ၀ါကြီးတယ်လေ အဲဒါကြောင့် မ တတ်ခေါ်တာပါကွယ်:P)။ကိုအောင်သာ ငယ် ရဲ့ ကဗျာတွေလဲ ပါမယ် ။
ဆရာကြီးဦးတင်မိုးရဲ့ ကဗျာလေးတွေကိုလဲ နှစ်သက်တယ် ဆရာမ မနောဟရီ ကဗျာတွေ၊တာရာမင်းဝေရဲ့ ကဗျာ၊မင်းခိုက်စိုးစန် ကဗျာတွေ ၊ပြောရင်တော့ ကုန်မယ် မထင်ဘူးထားလိုက်တော့ ကျမ အနှစ်သက်ဆုံး ကဗျာကတော့
"ရန် .......ငါ မပြတ်လို့
ဆွေးနွေးစရာ အကြောင်းမရှိ" ဆိုတဲ့ကဗျာလေး ပါဘဲ။
အရင် ကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ Tagလေ့မရှိပါဘူး
ခုတော့ Tag ပြီ
သယ်ရင်း အရင်းခေါက်ခေါက် ဖြစ်တဲ့
အအိပ်နဲ့အစားဆို ထိပ်ဆုံးက လို့ပြောတဲ့ ညီမလေး တာတာ
လူငယ်တွေအားလုံးကို အလေးပေးဆက်ဆံပြီး နိုင်ငံ အတွက်အမြဲနားစွင့်နေတဲ့ ပြည်သူ့ဘုန်းဘုန်း
အားတဲ့ အချိန်လေးမှာရေးပေးပါ အားရက်နဲ့ရေးမပေးရင်တော့ ကဗျာထဲကလိုဘဲ
သွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာ အကြောင်းမရှိဘဲ နော်
ရေးသားသူ မေသူပိုင် at 3:05 AM5တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
ရေးသားသူ Tea at 7:26 PM0တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
တူညီရာစာစဉ် Song, မြန်မာသီချင်းများစုစည်းမှု
တစ်ပါတ်အတွင်း သတင်း အခြေအနေများကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဘုံသာလမ်းတွင်း ယမန်နေ့ညနေက
အနီးတ၀ှိုက်တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မတွေ့ရှိခဲ့ပေ။
(စက်ကွင်းမလွတ်သူ အားလုံး တစစီလွင့်စင်ကာ
အပူတပြင်းစစ်ဆေးလေ့လာကြည့်ရာ တိုကျိုဖရိုင်းချစ်ကန်း မှ အချဉ်တို့ထားသော
အတင်းရေးမှူးတစ်မှ မိန်းမစားရန်အလို့ငှာ အိမ်သူပိုင်
(၂) သဘာငတိနှင့် အဖွဲ့သည် မနေ့ည၁၀ နာရီခန့်က ပိုင်အိုးနီးယားကလပ်အတွင်း
မော်ဒန်မလေးများ လှုပ်ရှား ကခုန်နေမှူအခြေအနေများကို အငမ်းမရ
သွားရောက်ကြည့်ရှူကာ အားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပြီး လိုအပ်သည်များကို
(၃) လွန်ခဲ့သော သောကြာနေ့က မိုးအပြင်းအထန်ရွာသွန်း၍ ရန်ကုန်မြို့
ပန်းဆိုးတန်းလမ်း ပလက်ဖောင်းနံဘေးတွင် ခြေသလုံးခန့်ထိ
ရေများလျှံတက်လျှက်ရှိရာ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ မီးပွိုင့်ထောင့်တွင်
ပလက်ဖောင်း ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုဆက်သွယ်သော နှစ်ပေခန့်မြင့်သည့်
မြောင်းကူးတံတား ဖောက်လုပ်သွားမည်ဟု သိရှိရသည်။ ခန့်မှန့်ကုန်ကျငွေမှာ
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၂ သန်းခန့်ဖြစ်ပြီး ရူးပေါဂိုဏ်းရန်ပုံငွေမှ
(၄) အတင်းရေမှူး ၁ ဗိုလ်ချုပ်ဗီလိန်သည် အစိုးရယဉ်မသုံးရနေ့ ဖြစ်သော
လွန်ခဲ့သောသောကြာနေ့က ယဉ်များကိုစစ်ဆေးရန် ရန်ကုန်မြို့တွင်း
(၅) အမေရိကန်နိုင်ငံ လေ့လာတွေ့ရှိချက်စစ်တမ်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံရှိ
စီအန်ဂျီကားများသည် လောင်စာဆီ စားရိတ်သက်သာသော်လည်း
(၆) လွန်ခဲ့သော လက မြန်မာနိုင်ငံမှ ရှေးဟောင်းသုတေသနအဖွဲ့များ
ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့် ပုဂံခေတ်ကအ၀တ်အထည်ဟုယူဆရသော အ၀တ်ထည်ကို
ေ၇ှးဟောင်းပြတိုက်တွင် ထည့်သွင်းပြသထားခဲ့သည်။ယမန်နေ့က သဘာပတိသည် သူ၏
ဇနီးသည်ပျောက်သွားသော အတွင်းခံဖြစ်သည်ဟု ဆိုကာ၎င်းအ၀တ်ထည်ကို ပြတိုက်မှ
(၇) ရူးပေါဂိုဏ်းမှ ငှက်ကထကြီးသည် အမေရိကန်နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်
၀မ်းမြောက်ကြောင်းသ၀န်လွှာကို တရုတ်ပြည်ရှိ ငလျင်ဒဏ်ခံရသူပြည်သူများအတွက်
နှစ်နိုင်ငံအကြား အချေအတင် အငြင်းပွားလျှက်ရှိ၏။
(၈) ရူးပေါဂိုဏ်း ပညာရေးဝန်ကြီးမ ဇင်ဇင်သည်
မူလတန်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများတွင် ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ပေါချာရေးအတွက်
အပေါတကာ့အပေါဆုံး သင်ခန်းစာများ ထည့်သွင်းသွားမည်ဟုသိရသည်။ အဂ်လိမ်စာ
ပိုမိုတတ်မြောက်စေရေးအတွက်လည်း အဂ်လိပ်စာများကို မြန်မာစာများဖြင့်ညပ်၍
သင်ကြားသွားမည်ဟုသိရသည် ။ဥပမာအားဖြင့် မမ Fat Fat ထထ Dance ၊ အကမှာ First
၊ Dance ပါ Dance ပါ မမရာ ၊ ညည Moon သာသာ၊ Night အခါ ငါစာရ၊ မမ Fat Fat
ထထ Dance.... အစရှိသောကဗျာများကိုလည်း ထည့်သွင်းသွားမည်ဟုသိရှိရသည်။
တစ်ပါတ်အတွင်းသတင်းအစီအစဉ် ဒီတင်ပြီးဆုံးပါပြီ ။
ပုံ/ ပျံကြားရေးဝန်ကြီး ချမ်းရ
A High School friend sent this to me from email.
သူငယ်ချင်းက တင်ပေးပါဆိုလို့ ။
Update for Source:
This post is also available at http://chanye-chanye.blogspot.com
ရေးသားသူ PP at 3:21 PM 1 တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
တူညီရာစာစဉ် Joke, ဟာသ
ဒီတစ်ပါတ်တော့ အမေရိကားမှာ တနလာင်္နေ့တိုင်း လူကြည့်အများဆုံး TV show ဖြစ်တဲ့ Dancing with the Stars (ကြယ်စင်များနှင့် ကခုန်ခြင်း)က အကတွေကို share ချင်ပါတယ်။ Dancing with the Stars အကြောင်းကို နွေတုန်းက တစ်ခါရေးဖူးပါတယ်။ အဲဒီ ရှိုးအကြောင်း အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ ဒီကိုသာ နှိပ်လိုက်ပါတော့။ ပြန်ရေးရင် ပို့စ်တွေ ရှည်နေမယ်လေ။
DWTS က နှစ်ရက်ပြတာပါ။ တနလာင်္နေ့မှာ စုံတွဲတွေကပြီး အင်္ဂါနေ့ Result show ကျရင် အကစုံတွဲတစ်တွဲစီဖြုတ်တာပါ။ Result Show နေ့ကျရင်တော့ ဒီနေ့ခေတ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အဆိုတော်တွေ၊ မင်းသမီး၊ မင်းသားတွေက သီချင်းလာဆိုပါတယ်။ အဲ… သူတို့သီချင်းဆိုရင်တော့ Dancing with the Stars ရှိုးက professional dancer တွေ ကပါတယ်။ အဲဒီvideoတွေ ကို share ချင်တာပါ။ လာဆိုတာတွေကတော့ အများကြီးပဲ။ ပေဖူးကတော့ ဗမာပရိသတ်သိလောက်မဲ့ အဆိုတော်ငါးယောက်ကို ရွေးထားပါတယ်။
ဂျေလိုလို့ လူသိများတဲ့ အဆိုတော်မင်းသမီး Jennifer Lopez ကိုတော့ မသိတဲ့သူ မရှိလောက်ဖူးလုိ့ ထင်ပါတယ်။ J-lo ဆိုတာနဲ့ သူ့ရဲ့ နာမည်ကြီးသီချင်း Let’s get Loud ကို ပြေးသတိရမှာပေါ့နော်။ ဗမာအဆိုတော် တင့်တင့်ထွန်းကတောင် “နည်းနည်းလောက်”ဆိုပြီး ပြန်ဆိုထားသေးတယ်။ အဲဒီသီချင်းကိုပဲ DWTS result show မှာ ပြန်ဆိုသွားတာပါ။ ရှေ့မှာ dancer တွေနဲ့ ဆိုတော့ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် မြူးမြူးကြွကြွပါပဲ။ ကသွားတဲ့ အကတွေကတော့ Latin အဓိကပေါ့နော်။ Cha Cha အကအများဆုံးပါပဲ။ ပြောနေကြာတယ်။ ကြည့်လိုက်ကြစို့။
Westlife အဖွဲ့ကို နှစ်သက်ကြတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်များအားလုံး Mandy သီချင်းကို သိကြမှာပါ။ တကယ်ကတော့ Westlife က ပြန်ဆိုထားတာပါ။ မူရင်းအဆိုရှင်ကတော့ Barry Manilow ပေါ့။ ဒီသီချင်းမှာ ကသွားတဲ့ professional dancer နှစ်ယောက်က Jonathan နဲ့ Anna လို့ သိရပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်က အပြင်မှာလဲ တကယ်လက်ထပ်ထားတာပါ။ ကသွားတာကတော့ Foxtrot style ပါ။ Foxtrot အကအကြောင်းကို America Ballroom Challenge မှာ ရေးဖူးပါတယ်။ ဒီမှာလဲ လင့်ခ်ပြန်ချိတ်ပေးထားပါတယ်။
များသောအားဖြင့် DWTS ရှိုးမှာက အဆိုရှင်ကို ပထမတစ်ပိုဒ်အသားပေးပါတယ်။ chorus ပြီးလို့ နောက်တစ်ပိုဒ်ကျမှ အကသမားတွေ ၀င်တာပေါ့။ ဒီအကကတော့ နူးညံ့မှုကို ခံစားရတယ် ပြောရမှာပေါ့။ ကောင်မလေး Anna ရဲ့ မျက်နှာမှာ ချစ်တဲ့သူနဲ့ က,ရလို့ ပြုံးနေတဲ့ မျက်နှာကို အထင်းသား မြင်ရမှာပါ။ အားကျစရာ…… :P
Everyday – Rascal Flatts
Rascal Flatts ဆိုတာ နာမည်ကြီး Country Music အဖွဲ့တစ်ခုပါ။ ကန်းထရီးဂီတကို နှစ်သက်တဲ့သူတိုင်း Rascal Flatts ကို ကြိုက်ကြပါတယ်။ ပေဖူးကတော့ Life is A Highway ဆိုတဲ့ သီချင်းကို တော်တော်နှစ်သက်ပါတယ်။
အကအကြောင်းပြန်လှည့်ရင်တော့ Dancing with the Stars ရဲ့ အသည်းစွဲ Season4Champion Apolo နဲ့ Julianne ပါ။ သူတို့ episode 100 မှာ ပြန်လာက ပေးတာပါ။ ကသွားတာကတော့ Viennese Waltz လို့ ထင်ရပါတယ်။ American Ballroom Challenge မှာ ဒီအကအကြောင်းကို ရေးဖူးပါတယ်။ သိချင်ရင် ပြန်သွားကြည့်လိုက်နော်။ ဒီ Viennese Waltz ကတော့ ရှေးရိုးသိပ်မဆန်ပါဘူး။ Lift တွေ အများကြီးပါတဲ့ show dance တစ်ခုပေါ့။
Esa Morena - Ozomatli
ဒါကတော့ အမေရိကားမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပါ။ Grammy ဆုတွေ တစ်သီကြီးရတဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပေါ့။ ဒီသီချင်းကတော့ စပိန်ဘာသာစကားနဲ့ဆိုသွားတာပါ။ ကသွားတဲ့ အကကတော့ Samba ပါ။ ဒီလက်တင်အကတွေအကြောင်းကို နောက်အချိန်တော့မှပဲ တသီကြီးရေးဦးမယ်။ ဒီအကမှာတော့ အတွဲတွေလဲက သွားတာကို ကြိုက်တယ်။ နောက်သီချင်းမြန်လာတာနဲ့ အကမြန်လာတာကိုလဲ ကြိုက်တယ်။
It’s complicated – Avril Lavinge
Avril Lavinge ဆိုတာကတော့ မစိမ်းတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ပေါ့။ သူလဲ လာဆိုသွားတာပဲ။ အက ကလဲ ရေလည်မိုက်တယ်နော်။ ကသွားတဲ့ အကကတော့ လက်တင် သိပ်မဆန်ပါဘူး။ but the lifts are amazing! :)
ရေးသားသူ PP at 9:08 PM0တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
တူညီရာစာစဉ် Dancing, Dancing with the Stars, အက
ပို့စ်တွေ မတင်ဖြစ်တာ ကြာ လို့ T က တော့ခ်နေတယ် မေသူတို့ ပို့စ်မတင်တာ ၀မ်းရီးယား လောက် ရှိတော့မယ် နော် တဲ့။ အဲလို ရွဲ့ပြော လာတယ်။ သိတယ် မဟုတ်လား ရီဆန့် တလီးမှာ ဘလောခ့် လောက မှာ ကေ့စ်တွေက သိပ်ရှုပ် နေတယ်လေ။ ခရစ်စမတ် ကလည်း နီးနေပြီ ဆိုတော့ ရာသီဥတု ကလည်း အေးလာပြီ ဆိုတော့ ခရစ်တော်မှာ အိပ်ပျော် မသွားအောင် ထွိုင်းး နေရတယ်လေ။
ယူနီတွေ ကလည်း ပိတ် ဟောလီးဒေး တွေကလဲ ရက်ဆက်မို့ ဒီတစ်ပတ် ဟောလီးဒေးမှာ ဘော့စတန်က ကိုယ်နဲ့ အမျိုး မတော်တဲံ့ သူတွေ ရှိတဲ့ ဆီတော့ မသွား ဖြစ်ပေမယ့် ဗောစကိုင်း ပင်တွေ ပေါတဲ့ စစ်ကိုင်းချောင် ဘတ်တော့ မတ်ဒီတေးရှင်း လုပ်ဘို့ သင့်ခ်ကင်း နေပါတယ်။ ခက်တာက မတ်ဒီတေးရှင်း လုပ်မယ့် ကျောင်းမှာလဲ ဖုက အလုံအလောက် မရှိဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဖု တွေကို ဒိုနိတ်ဘို့ တော့ ပလန် နေတယ်။ ကိုယ့်ဖေဖေ ကလည်း ဖီးဆင့်ခ်နစ် မန်းကြီးလဲ မဟုတ်တော့ ဖလိုက်တစ်ကတ် ကလည်း ၀ယ်မပေး နိုင်ဘူးလေ။ ကိုယ့် အင်ကမ်းနဲ့ ကိုယ်ဂိုးရမှာ ဆိုတော့ ခရီး ဘယ်ဂိုးနိုင်မလဲ? ppကလဲ မအားဘူး ဆိုတော့ မ ဒန့် ဖြစ်ပါဘူး (ppဆိုတာ ပေဖူးကိုပြောတာပါ)။
ဟုမ်းမှာဘဲ စတေး တော့မယ်လို့ ဒီဆိုက် လုပ်ထား ပါတယ်။ယူတို့ လဲ နိုးတဲ့ အတိုင်း ဘဲ ဟုမ်းမှာ စတေးရင်လဲ ကွန်ပျုေ၇ှ့မှာ စစ်ပြီး ဘလောခ်တွေ ဖတ်ရတာတော့ အမ်ဂွိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဘလောခ် ဂင်လုပ်နေကြတဲ့ ဟုမ်း၁၆က မန်ဘာတွေ ကလည်း ဘီးဇီး နေကြလို့ ပို့စ်တွေကို
ရီဂူလာလီး မတင်နိုင်တော့Tက အန်ဂရီး တယ်လေ၊ တီးက အမ်းဂရီးတော့ ဂျီတော့ခ်ဝင်လာရင်တော့ အင်ဗစ်ဆေးဘဲနဲ့ ချက်ဖြစ်တယ်။ လင်းစစ်သူက လဲ ဘရုပ်ကန်းဟတ် ဖြစ်နေတော့ ပို့စ်သိပ်မတင် ဖြစ်ဘူးတဲ့ ။
ဆိုင့်ရန့် ကိုပိန်ကတော့ ပို့စ်တွေတင်နေလျက်ပါဘဲ။ Pp ကလည်း ဒန့်တဲ့ အကြောင်းတွေ ရေးသားလျက် သူရဲ့ ဟတ်ဗစ် အကြောင်းတွေ ကို ၀ုတ်နေလေရဲ့။ အိတာ ကလည်း ပိုအမ် တွေကို ၀ုတ်တော့ ၀ုတ်တယ် အရင်ကလို သိပ်မ၀ုတ် ဖြစ်တော့ဘူး သူလဲ ဘီးဇီးနေတယ်တဲ့။
၀ှက်အဲဗား ဟုမ်း၁၆ ကို အားပေးနေတဲ့ ရီဒါတွေကို သင့်ခ်ယူ စိုးမတ်ပါ။
၀ှစ်ရှင်းယူ မဲရီးခရစ်စမတ်အန် ဟတ်ပီးနယူးရီးယားပါ။
ps. T ဆိုတာ တီးကိုပြောတာပါ၊ ppဆိုတာပေဖူးကိုပြောတာပါ
ဒီစာအိုင်ဒီယာလေးကိုတော့ ဂစ်တာ ဆီက ရတာပါ ခရစ်ဒစ်ပေးပါတယ် ဂစ်တာရေး
ရေးသားသူ မေသူပိုင် at 5:26 AM9တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
တူညီရာစာစဉ် Happy New Year, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး
MUST VISIT လည်ပတ်ရမည့် နေရာများ - (၁) Mount Rushmore
အစီအစဉ်အသစ် တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက် ပေးပါရစေ။ ဒီနေ့က စပြီး စာဖတ်သူတွေ အားလုံးကို ကမ္ဘာကြီး ပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ လည်ပတ် သင့်သည့် နေရာများ နှင့် အလျဉ်းသင့် သလို မိတ်ဆက် ပေးပါမယ်။ ဟိုး အာဖရိက၊ အမေရိက တွေ၊ ကာရေဘီးယမ်း နေရာတွေပါမက အာရှ၊ သြစတေးသျ နဲ့ ဥရောပ၊ အရှေ့ အလည်ပိုင်း ဒေသတွေ ပါမကျန် ရှိရှိသမျှ နေရာ အရပ်တွေက MUST VISIT လည်ပတ်ရမည့် လည်ပတ် သင့်သည့် Destinations များ အကြောင်းကို တင်ပြ သွားပါမယ်။
ဒီနေ့တော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက South Dakota ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ Mount Rushmore ကို အပိုင်း ၁ မှာ ဖော်ပြသွားပါမယ်။
Mount Rushmore ဆိုတာ
Rushmore ဆိုတဲ့ တောင်ပေါ်မှာ အင်မတန် ကြီးမားတဲ့ ရုပ်ထုကြီးတွေကို ထုထွင်းထားတဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။ ယခင် အမေရိကန် သမ္မတတွေ ဖြစ်တဲ့ George Washington, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt နှင့် Thomas Jefferson တွေရဲ့ မျက်နှာ ပုံတွေကို ထုထွင်းထားတာပါ။
The Black Hills of South Dakota, United States
လူသွားများတာကတော့ June နဲ့ August ကြား ကာလပါ။ အကောင်းဆုံး သွားသင့်တဲ့ အချိန်ကတော့ September - October သို့မဟုတ် April - May ဖြစ်ပါတယ်။
South Dakota ပြည်နယ်၊ ပင်လယ်ပြင်အထက် အမြင့်ပေ ၁၇၃၇ မီတာ (၅၇၀၀ ပေ) မြင့်မားတဲ့ တောင်တန်း တစ်ခုရဲ့ အရှေ့တောင်ဘက် အခြမ်းမှာ ယခင်က အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ သမ္မတများ ဖြစ်ကြတဲ့ George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt နှင့် Abraham Lincoln တို့ ရဲ့ ကြီးမားလှတဲ့ မျက်နှာ ကြီးတွေ တည်ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကြီး၏ သမိုင်းကြောင်းအတွက် အရေးကြီးလှတဲ့ အမှတ်အသား တစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
ရုပ်ထုကြီးတွေကို ထုထွင်းဖို့ အတွက် ခုနှစ်သက္ကရာဇ် ၁၉၂၃ မှာ Doane Robinson ဆိုသူက စတင် တင်သွင်း အကြံပြုခဲ့တာပါ။ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ South Dakota ပြည်နယ်မှာ ရှိတဲ့ Black Hills တွေကို လည်ပတ်တဲ့ လူဦးရေ တိုးပွားလာစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ပညာရှင် Gutzon Borglum နှင့် အဆိုပါ အစီအစဉ်အရ ရုပ်ထုကြီးတွေကို ထုထွင်းဖို့ အတွက် သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ Mount Rushmore ကို ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းက အဆိုပါ တောင်သည် ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ဝိုက်မှာ အမြင့်ဆုံးနေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့တောင်ခြမ်းကို မျက်နှာ မူနေသည့် အတွက် နေ့တာ တစ်လျှောက် နေရောင်ကိုလည်း ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး သမ္မတ လေးဦး၏ မျက်နှာကို ထုထွင်းဖို့ေ၇ွးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉၂၇ မှာ တိုင်းတာမှုတွေ ရယူပြီး Plaster Model တစ်ခု စတင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ထူထပ်လှတဲ့ ကျောက်တုန်းကြီးတွေကို ၇.၆ - ၁၅ စင်တီမီတာ အလွှာများအထိ ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ဒိုင်းနမိုက်တွေကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံး မျက်နှာပြင်ကို ချောမွေ့သပ်ရပ် သွားစေရန်အတွက် နောက်ဆုံး အဆင့်အနေနဲ့ Honeycombing လို့ ခေါ်တွင်သော နည်းပညာတစ်ခု ကိုလည်း အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
၁၉၂၇ မှ ၁၉၄၁ အထိ အဆိုပါ Mount Rushmore ကြီးအတွက် အလုပ်လုပ်ရင်း ပညာရှင် Gutzon Borgulum က ၁၉၄၁မာ ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ သူ၏သား Lincoln Borgulum မှ ဆက်လက်ပြီး တာဝန်ယူ၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံး အဆိုပါ အစီအစဉ်အတွက် ပိုက်ဆံ ကုန်သွားသည် အထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး Studio ကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်။ သမ္မတကြီးတွေရဲက မျက်နှာတွေကတော့ ဒီအတိုင်းပဲ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
စာဖတ်သူတွေလည်း အခုလို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု သမိုင်းကြောင်းရဲ့ အရေးပါလှသော သမ္မတ လေးယောက်၏ ရုပ်ထု မျက်နှာကြီးတွေ တည်ရှိရာ Mount Rushmore ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ South Dakota ပြည်နယ်မှာ သွားရောက် လေ့လာ လည်ပတ်နိုင်ပါကြောင်း ...
ရေးသားသူ Tea at 8:25 PM0တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
တူညီရာစာစဉ် MUST VISIT, လည်ပတ်ရန်
တရားရုံးသို့ မကြာခဏ ရောက်ရှိပြီး ထောင်ဒဏ် အပြစ် ပေး မှုကို ခဏခဏ ခံနေရသည့် တရားခံတစ်ဦးကို တရား သူကြီးက မေးလေသည်။
တရားသူကြီး - မောင်မင်း ... တရားရုံး ခဏခဏ ရောက်နေပါလား
တရားခံ - ဟုတ်ကဲ့ ...
တရားသူကြီး - ထောင် ဘယ်နှစ်ကြိမ် ကျခံပြီးပြီလဲ
တရားခံ - ၁၂ ကြိမ်ပါ ....
တရားသူကြီး - များလိုက်တာ ... အခုထိ ကောင်းကောင်း မနေဘူးပေါ့ .. ဟုတ်လား ..
တရားခံ - နောက်ဆို နေပါ့မယ် ..
တရားသူကြီး - မဖြစ်ဘူး .. ဒီတစ်ခါ ထောင်ဒဏ် နှစ် များများ ချလိုက်မယ် ..
တရားခံ - ကျွန်တော်တို့ ဖောက်သည်တွေ ဖြစ်နေပြီပဲ .. နည်းနည်း လျှော့ပေးပါ ..
Source : mmcp
ရေးသားသူ Tea at 8:09 PM0တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
ကျောင်းတက်နေတယ်ဆိုရင် ဆိုတဲ့ ဟာသပို့စ်လေးတွေကို မတင်တာ တော်တော်လေးကို ကြာပေါ့နော်။ ဘာဖြစ်လို့ မတင်ဖြစ်လဲဆိုရင် အရှေ့က အပိုင်းလေးပိုင်းမှာ ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကို ကျောင်းဖွင့်ထဲကကို ဗရုတ်သုတ်ခနိုင်နေတာလေ။ အခုမှာပဲ စာမေးပွဲကြီးနီးပြီဆိုတော့ နည်းနည်းအားနေ…. အဲလေ Home Study Time တွေ ပိုများလာတော့လဲ ပေဖူးလွှာတို့ စာရေးဖြစ်ပြီပေါ့နော်။ အဟိ…..
မရယ်(ရီ)ရသေးတဲ့ လူတွေ အတွက်ကော ပြန်ရီချင်တဲ့ စာဖတ်သူတွေ အဆင်ပြေသွားအောင် အရှေ့က အပိုင်း(၁)၊ အပိုင်း(၂)၊ အပိုင်း(၃)၊ အပိုင်း(၄) တို့ကို လင့်ခ်ချိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါ။ နိုင်ငံရပ်ခြား ရပ်ဝေးမှာ မိဘနဲ့ ခွဲပြီး ကျောင်းတက်နေကြတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ ဖြစ်တတ်တဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို စာတစ်ကြောင်း ဟာသအဖြစ်ပြောင်းပြီး ဘာသာပြန်ထားတာပါ။ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်သွားရင်တော့ ကျိတ်ပြီး ရီလိုက်ပေါ့နော်။ အဟိ။ တစ်ပိုင်းကို ဆယ်ကြောင်းနှုန်းနဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေးတန်ရေး၊ ဘာသာပြန်စရာရှိပြန်ပေါ့နော်။ အားပေးခဲ့ကြတဲ့ စာဖတ်သူများအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါဧ။်။
၁။ ကြက်ဥကို Microwave ထဲ တမင်ဖြစ်ဖြစ်၊ မသိလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ထည့်ပြုတ်တဲ့ ကျောင်းသား ငါးယောက်ထက်မနည်း တွေ့ဖူးပြီ။
၂။ ကိုယ့်bodyမှာ ပွန်းပဲ့ရာတွေ ရှိနေတယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ချော်လဲလို့ ဘယ်နား ခြစ်မိမှန်းလဲ မမှတ်မိတော့ဘူး။
၃။ နွေကျောင်းပိတ်လို့ အမေ့အိမ်ပြန်တယ်။ ကျောင်းပြန်ဖွင့်လို့ ပြန်သွားရတော့မယ့်အချိန်တွေဟာ ပထမနှစ်လိုပဲ သစ်လွင်နုပျိုနေဆဲပါ။
၄။ ဒေါ်လာ၁၅၀၀အထက်မှာ တန်တဲ့ Laptop ပေါ်မှာ sandwich တွေ တင်လိုတင်၊ မုန့်ကျွှတ်အမှုန့်တွေ ကျလိုကျ။
၅။ Energy Drink တွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ မခွဲမခွာ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေပေါ့။
၆။ Grocery Store တွေမှာ free sample food တွေ လိုက်စားတာ အကျင့်ဖြစ်နေပြီ။
၇။ Noun နာမ်စာလုံးတွေ ဖြစ်တဲ့ “Google” တို့ “Wikipedia” တို့ ဆိုတာ ကောလိပ်မှာ Action Verb တွေ ဖြစ်လာတယ်။
၈။ ရေခဲသေတ္တာထဲနှစ်ပေါင်းများစွာ သိုလှောင်ထားတဲ့ အစာနဲ့ မင်းညီအငယ်ဆုံးနဲ့ ဘယ်သူအသက်ပိုကြီးလဲ???? :D
၉။ Cell Phone ထဲက တချို့နံပါတ်ပိုင်ရှင်နာမည်တွေက “Sketchy Steve”, “Barbie Doll” နဲ့ “Alcohol Dude” ဆိုပဲ။
၁၀။ Cell phone text ရိုက်တာက Keyboard မှာ Type ရိုက်တာထက် ပိုမြန်နေမလားပဲ။
ကဲ ဒီတစ်ခေါက်ကော ဘယ်သူတွေ ဘယ်နှစ်ခုအမှန်ထိသွားလဲ။ 
ရေးသားသူ PP at 8:11 PM 8 တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
Black Hole ဖန်တီးနိုင်သည်ဟု ယူဆကြသော Large Hadron Collider (LHC)
ကျွှန်တော် မောင်ပိန် ပိုစ့် မရေး ဖြစ်တာလဲ တစ်နှစ်လောက် ရှိတော့မယ်နဲ့ တူတယ်။ ဟိုတစ်လောက အင်တာနက် အန္တရာယ် များတဲ့ ၀က်ဆိုက် ကနေ ဖိုင်တွေ ဒေါင်လို့ လုပ်လိုက်တာ ကွန်ပျူတာ ပိုးဝင်ပြီး စက်လောင် တော့မယ် အထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ windows တစ်ခုလုံး အစအဆုံး ပြန်သွင်း တာတောင် မပြီးသေးဘူး ကွန်ပျူတာ screen ပါ ခရမ်းရောင် အဆင်း ကြောင်း ပြပြီး ကြွသွား ရှာတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ကျောင်းမှာရှိတဲ့ techdesk ကို ယူသွားပြီး myhome16 မှာ Blog မြန်မြန် ပြန်ရေး နိုင်အောင် အားသွန် ခွန်စိုက် ကြိုးစား ခဲ့ရတယ်။ နောက်ဆုံး တစ်ပတ်လောက် ကြာတော့ Dell က ပစ္စည်း ပို့လာ ပေးတော့မှ ကျွှန့်တော့် ကွန်ပျူတာ ပြန်ကောင်း သွားရှာ တော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ windows အသစ် ပြန်သွင်းလိုက်တော့ ကွန်ပျူတာထဲမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်း ၁၀ နှစ်စာ myhome16 မှာတင်ဖို့ ကြိုတင် ရေးထားသော post များ techdesk လူသားတွေ ရှင်းလိုက်တာ အကုန် ပါသွားတယ်…. ဒါ့အပြင် မြန်မာ font ကလဲ အသစ် ပြန်သွင်းပြီး အလုပ် မလုပ်လို့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ google လုပ်၊ ဖြေရှင်းနည်း ရှာတာ တစ်ပတ်လောက် ကြာသွားတယ်။ ဒီဟာ တွေကတော့ ဘာဖြစ်လို့ ကျွှန်တော် မောင်ပိန် ပို့စ်နုစ်ပတ် တိတိ မတင်နိင်တဲ့ အကြောင်းရင် များထဲကတစ်ခုပါပဲ။ အားလုံးတော့ ခွင့်လွတ်ကြပါ။
ကျွှန်တော် ဒီတစ်ပတ်တော့ ရူပဗေဒနဲ့ ပတ်သက်တဲ အကြောင်းအရာ တစ်ခုအကြောင်း ပြောပြ သွားပါမယ်။ ဒီဟာကတော့ Black Hole ကို ဖန်တီး ပေး နိုင်သည်ဟု လူတွေက ယူဆကြသော LHC(large Hadron Collider) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ LHC နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့ အငြင်းပွား စရာ အရာ တော်တော်လေး များရှာ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိုပါ ပြသာနာများ မပြောခင် LHC ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းနဲ့ ယင်းကို ဆောက်ရခြင်း ၏ အကြောင်းများ ကို ရှေးဦးစွာ ကျွန်တော် ရှင်းလင်း သွားပါမယ်။
၂၀ ရာစု အစပိုင်း ကတော့ သိပ္ပံပညာရဲ့ အတိုးတက်၊ အထွန်းကားဆုံး အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ Alberb Einstein ရဲ့ Relativity Theory နဲ့ Photoelectric effect တို့ ဟာ ကမ္ဘာကြီး အပေါ် လူသား တွေရဲ့ အမြင်ကို အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲ ခဲ့ ရုံမျှမက ရုပဗေဒ လောက ကြီးကို လည်း အကြီး အကျယ် ပြောင်းလဲ ခဲ့ပါတယ်။ Quantum mechanics ကလဲ ဒီကနေ စပြီး ဖြစ်ထွန်း လာခဲ့ပါတယ်။ electron, nucleus စသည့် အခြေခံ အကျဆုံး ဖြစ်သော အရာများကို ဥရောပ တိုက်မှာ တဗြုန်းဗြုန်း တွေရှိခဲ့ ကြပါတယ်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာ စစ်ပြီးတော့ အမေရိကန် ကတော့ သိပ္ပံ လောက ကို ဦးဆောင် ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း သိပ္ပံပညာ အတွက် ပိုပြီးတော့ အဆင့်မြင့်သော စက်ပစ္စည်းများ အပေါ် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံဖို့လိုကြောင်း အမေရိကန်က ကြိုတင် မြင်ကာ ဓတ်ရောင်ချီ စက်များနှင့် particle accelerator များကို တည်ဆောင်ခဲ့ ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ရူပဗေဓ စီမံကိန်းများကို တစ်နိုင်တည်းက မဦးဆောင်နိုင်တာနဲ့ အညီ (particle accelerator ဆောက်ခနဲ့တင်မွဲသွားလောက်တယ်) ဥရောပနိုင်ငံ အများစုဟာ အချင်းချင်း ပေါင်းပြီး CERN( European Council for Nuclear Research) ကို တည်ထောင် ခဲ့ပါတယ်။ CERN ကြောင့်မလို့ အရေးကြီးတဲ့ ရူပဗေဒ နိယာမများကို သက်သေ ပြနိုင် ခဲ့ပါတယ်။ 1971 နှစ်တွင် Intersecting Storage Rings proton-proton collider စတင်ခဲ့ပြီး proton-antiproton collider ကို 1981 ခုနှစ်တွင် စတင် လုပ်ဆောင် ခဲ့ကာ နောက်နှစ်နှစ် ကြာတော့ W နှင့် Z particle များကို တွေ့ရှိခဲ ပါတယ်။ တွေ့ရှိမှု ကြောင့် သိပ္ပပညာရှင် များဟာ လျှပ်စစ် ဆွဲအားနဲ့ weak force တို့ကို unified field theory အောက်တွင် အောင်မြင်စွာ သက်သေ ပြနိင်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံးသော LEP(large electron positron collider) ကိုလည်း CERN မှာဘဲဆက်လက်တည်ဆောက်ခဲ့ကာ ယင်းကြောင့်မလို့ sub-atomic particle များနဲ့ ပတ်သက်သော တန်ဖိုး များကို အလွန် တိကျစွာ တိုင်း နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ LEP မှရသော data များသည် တိကျ လွန်းလို့ ၄င်း data များသည် ယခုလက်ရှိ စမ်းတပ် နိုင်သည့် energy level ကိုကျော်လွန် သည့် အဖြစ် အပျက်များ ကိုပင် ခန့်မှန်း နိုင်ပါတယ်။ ယင်းကြောင့် နောက်ပိုင်း energy level ပိုမြင့်သော အဆင့်တွင် တွေ့ရှိနိုင်မည့် အရာများကို ခန့်မှန်း ခွင့်ပေး နေပါတယ်။
ဒီခန့်မှန်းချက်များကို လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်ဖို့ လိုအပ်သော စွမ်းအင် ပမာဏသည် 1TeV (1GeV) မျှရှိပါတယ်။ ဒီ ရူပဗေဒ နယ်ပယ် အသစ်ကို တွေ့ရှိဖို့ ၊ အနာဂတ်တွင် တွေ့ရှိမှုများ ထပ်မံ အကောင်အထည် ဖော်ရန် ရူပဗေဒ ပညာရှင် များသည် LHC(large Hadron Collider) ပေါ် မူတည် နေပါတယ်။ LHC ဟာ CERN ရှိတဲ့ အရင် နေရာ မှာဘဲ တည်ရှိပြီး CERN မှာရှိတဲ့၂၇ ကီလိုမီတာ ရှည်သော LEP tunnel နှင့် တခြား အရာများကို ပြန်လည် အသုံးချမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ LHC ရဲ့ ထူခြားချက် ကတော့ နောက်ဆုံးပေါ် superconducting magent နှင့် accelerator technology ကိုသုံးထားခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယင် LHC သည် ပိုရိုတုံ (proton) particle များကို ၇ TeV စွမ်အင်ဖြင့် တိုက်စေနိုင်ပြီး ထိတွေ့ ဓာတ်ပြုမှုနှုန်း ကို လည်း မြန်စေ ပါတယ်။ ထို့ပြင် ယင်းသည် ခဲ စသော အရွယ် ပိုကြီးသော particle များကို 1250 TeV ဖြင့်လည်း အချင်းချင်း တိုက်စေ နိုင်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိ အမေရိကန်မှာ ဆောက်နေသော Heavy Ion Collider ရဲ့ စွမ်းအင် အစ ၃၀ ရှိပါတယ်။ ဒီ LHC မှရှိမည့် ပညာရေး ဆိုင်ရာ၊ သိပ္ပံဆိုင်ရာ အကျိုး ကျေးဇူး များသည် အလွန်ပင် ကြီးလှပါသည်။ အနာဂတ် ရူပဗေဒ ပညာရပ်ရဲ့ အသက် သွေးကြောလို့ပင် ပြောလို့ရပါတယ်။
Large Hadron Collider ကိုမြေအောက် မီတာ ၅၀ မှ မီတာ ၁၇၅ နက်သော မြေအောက်ရှိ ကီလိုမီတာ ၂၇ မီတာ ရှည်တဲ့ စက်ဝိုင်းပုံ လှိုင်ခေါင်းထဲတွင်တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ၄င်းသည် ဆွီဇလန် နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်တွင် တည်ရှိပါတယ်။
LHC တွင် ပထမဆုံးသော particle beam များကို စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် စတင် စမ်းသပ် ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို လုပ်ဆောင် နေချိန်တွင် superconducting သံလိုက် တချို့သည် ပုံမှန်အတိုင်း မလုပ်ဆောင်ခဲ့ သောကြောင့် စမ်းတပ်မှု တစ်ခုလုံးကို ရပ်ဆိုင်း လိုက်ရကာ ပြန်လည် ပြုပြင်မှုများ လုပ်ဆောင် နေရပါတယ်။ ယင်း အမှား သည် ညံ့ဖျင်းစွာ ပြုလုပ် ထားသော လျှပ်စစ် စက် ကိရိယာငယ် တစ်ခုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းကြောင့် ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီလျှံ တန်စက်ကြီးကို ၃လ လောက် အနားပေပြီး အပြုအပြင် လုပ်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ superconducting magnet တွေကို အအေး ခံသော ဟီလီယံ ဓာတ်ငွေ့ ၆ တန်မျှ အပြင်ကို ယိုစီး သွားခဲ့ ရုံမျှမက သံလိုက် ၂၉ တုံးကိုလည်း ပြန်လည် ပြုပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ခကလည်း ဈေးမနည်း ပါဘူး။ ဒေါ်လာ ၂၁သန်း ကုန်မယ်လို့ တွက်ချက် ထားပါတယ်။
ရေးသားသူ သိပံ္ပမောင်ပိန် at 1:36 AM5တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
တူညီရာစာစဉ် Science, နည်းပညာ, သိပ္ပံ